10-kaan Talaabo Hadii Aad Raacdo Horumar Ganacsi Ayaad Gaaraysaa (Insha Allah) - Daryeel Magazine
10-kaan Talaabo Hadii Aad Raacdo Horumar Ganacsi Ayaad Gaaraysaa (Insha Allah)
Guusha ganacsi inta badan waxaa lagu gaaraa galad-ilaahay iyo in aad wax ka barato dadka kaa waayo aragsan. Haddii aad doonayso in aad ganacsi horumar leh samayso waa in aad dhagaysataa talooyinka dadka waayo-aragnimada leh ee soo arkay loolanka ganacsiga iyo horumarkiisa. Halkaan waxaan idinkugu soo bandhigaynaa qaar ka mid talooyinka ugu muhiimsan ee ay bixiyaan qaar ka mid ah ganacsatada ugu taajirsan caalamka.
1. Naftaada loolan gali – Richard Branson oo ah ninka aasaasay shirkada Virgin ee caanka ah ayaa ku talinaya in qofka doonaya in uu ganacsi abuuri uu diyaar u noqdo in uu loolan joogto ah galiyo naftiisa. Waxa uu aaminsanyahay in noloshu ay tahay waxbarasho joogto ah oo aad maalinkasta wax-cusub barato.
2. Qabo shaqo aad jeceshahay – Steve Jobs oo ahaa ninkii horumarka weyn gaarsiiyay shirkada Apple ayaa ku talin jiray in dadka dhalinyarada ah ay sameeyaan ganacsiyo aysan lacag darteed keliya aysan u abuurin balse ay sameeyaan ganacsi la xiriira waxyaabaha aad jeceshahay ee aad ku raaxaysato.
3. khatarta qaado – Jeff Bezos oo ah agaasimaha Amazon waxa uu leeyahay in aadan waligaa ogaanayn qiimaha fikradaada ilaa aad tijaabiso. Waxa uu sheegay in aad ka shalaayayso in aadan tijaabin , halkii aad ka shalaayi lahayd fashilka. Waayo fashilksa cashar ayaad ka qaadanaysaa balse fikrad aadan tijaabin waxba kama faa’idaysid.
4. Aragti lahoow – Agaasimaha Tumblr oo lagu magacaabo David Karp ayaa aaminsan in ganacsadaha hal-abuurka leh uu yahay mid aragti-dheer leh oo ay u cadahay waxyaabaha uu doonayo in uu sameeyo iyo sida uu ku gaarayo hadafkiisa.
5. Naftaada aamin – Henry Ford oo ahaa ninkii aasaasay shirkada baabuurta ee Ford ayaa laga soo wariyay in uu yiri ” Haddii aad aaminsantahay in aad wax samayn karto iyo haddii aad aamisantahay in aadan samayn karin. Labadaba waa ku saxsantahay” Haddii aad aaminsantahay in aad guuleysanayo, waad helaysaa wadooyinkii aad ku guuleysanlahayd balse haddii aadan aaminsanayn waxaad helaysaa marmarsiyo aad ku guul-daraysato.
6. La soco dadka wanaagsan – Cida aad la socoto, waa qofka aad noqoto. Reid Hoffman oo aasaasay bogga LinkedIn ayaa ku talinaya in wadada ugu degdega badan ee aad isbedal ku samayn karto in ay tahay in aad la xirato dadka aad doonayso in aad ku dayato oo aad heerkooda gaadho.
7. Samir lahoow – Qofna daqiiqad kuma guuleysto, qofkasta meel ayuu ka bilaabay. Steve Jobs ayaa yiri “Haddii aad si qoto dheer u fiiriso dadka guuleystay oo dhan waqti dheer ayay ku qaadatay” diyaar u noqo in aad waqti galiso ganacsigaaga.
8. Samayso Koox Hawlkar ah– Cidna guul ganacsi ma gaadho kaligeed, kuwa guuleystay waxay sameysteen koox hawlkar ah oo ka dambaysa. Sameyso koox awood leh haddii ay ahaan lahayd shaqaale ama cid kale oo ku taageerta.
9. Ha hilmaamin hadafkaaga – Markasta madaxa ku hayn goolka aad doonayso in aad gaadho. Ryan Allis oo aasaasay shirkad lagu magacaabo iContact ayaa sheegay in subax-kasta in uu ku celceliyo dhowr jeer goolkiisa si uusan u hilmaamin.
10. Cashar ka qaado qaladkaaga – Haddii aad ganacsi abuurto waa la hubaa in aad qalad samayn doonto, laakiin ganacsatada horumarka gaadhay waa kuwa cashar ka qaata qaladkooda oo aan markale ku celin isla qaladkii.
Waxyaabo ku badbaadin kara Insha Allah 10 Astaamood Oo Muujinaya Inaad Diyaar U Tahay Ganacsi 4 Talaabo Oo Aad Ku Horumarin Karto Xirfadaada Ka Fogoow Hadii Aad 7-daan Astaamood Ku Aragto Gabadha Aad La Haasawdo